Isandla Carry-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Ikhaya>Imisebenzi Yethu>I-Air Freight>Ukuthwala Isandla
I-Asean International Road Transport
I-Hand Carry Services, eyaziwa nangokuthi i-On Board Courier, isho ukuthi abasebenzi be-On Time bazohamba ngokwabo nempahla yekhasimende njengempahla yabo bese bebayisa ngesandla lapho beya khona. Ngokwenza njalo, i-On Time iqinisekisa abathengi babo ukufika okuphephile nokusheshayo kokuthumela ngesikhathi esibucayi '.
Kuphephile, kunokwethenjelwa, futhi kunika iphakheji lakho ukunakekelwa okukhethekile okwengeziwe.
I-Sohologistics ingumholi wemakethe yasekhaya ekuhlinzekeni le nsizakalo enobuchwepheshe kanye nomhlinzeki wesevisi we-Hand Carry osezingeni eliphezulu eChina.
Njengoba ineminyaka engaphezu kweshumi yokuhlangenwe nakho kwensiza ku-Handy bear kanye nabasebenzi bezokulethwa abaqeqeshwe kahle abangaphezu kuka-600 emhlabeni wonke, abakwaSohologistics bakunikeza insizakalo esebenza kahle kakhulu, esheshayo, ephephile nethembekile yezandla emhlabeni wonke.
Izinzuzo zeSohologistics Handy Carry Service
1. 365 * 24h: Izinsuku ezingama-365 izinsuku ezingama-24 zenkonzo yonyaka wonke yokuqinisekisa ukuthi izimpahla zakho zingathunyelwa kunoma iyiphi ingxenye yomhlaba noma nganoma yisiphi isikhathi ngekhwalithi kanye nesikhathi.
2. Impendulo esheshayo: ngocingo noma nge-MAIL, ithimba lethu lochwepheshe lizokwenza ngokwezifiso isixazululo sakho kungakapheli imizuzu eyi-15-30.
3. Ukulethwa okwabelwe ngokukhethekile: abasebenzi abangaphezu kuka-600 abaqeqeshelwe ukuqeqeshwa ngokukhethekile abavela kuwo wonke umhlaba bazoqinisekisa ukulethwa okuphephile nokusheshayo kwezimpahla zakho ngokunikeza inqubo yokuqapha ekhethwe ngokukhethekile nenqubo yokuphatha efanelekile.
4. Isaziso esisheshayo: Ngenxa yokubaluleka, sizokugcina sikuthumele ngokuthunyelwe ngeSMS, i-E-mail noma ngocingo kuwo wonke amaphuzu abalulekile wenqubo yokulethwa.
5. Isipiliyoni esicebile: Qonda ngokuphelele imiyalo yamasiko ezwe ngalinye, angaqinisekisa ukusulwa kahle futhi uvikele izingozi ezibangelwa ukwephulwa kwakho okungazi.
Yimiphi imikhiqizo efanelekile Isevisi yokuthwala izandla ry
Izingxenye zomshini webhizinisi eliphakeme, ubuchwepheshe bezimoto, ama-semiconductors, imishini yokuxhumana ngocingo, isayensi yezempilo kanye nemikhiqizo yosizo losizo lwabantu.
Kushesha kangakanani ngenkonzo ye-Hand Carry？
Izinzuzo ezisemqoka zensizakalo ye-Hand Carry
Ukusebenza kwansuku zonke kuwo wonke umsebenzi wendlu ngendlu, ngasikhathi sinye, izinsuku ezingama-6 kuya kwezingu-12 kusetshenziswa umnyango nomuzi ngaphakathi kwezinsuku ezifanayo ezingama-365 ngonyaka.